News - The dijitalụ esi mgbali transmitter bụ "jupụtara n'ezi obi"
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnọdụ mmepe akụ na ụba na teknụzụ ụwa agbanweela nnukwu mgbanwe. N'ịbụ nke ọgbọ ọhụụ nke teknụzụ ihe ọmụma na teknụzụ nkwukọrịta na-achịkwa, akụnụba mba m anọgidewo na-emeziwanye digitization, networking, na ọgụgụ isi ya. Onodu aku na uba enwetala otutu ngwa, obughi nani na nke ochie na nke ohuru. Ngbanwe nke ike ike na-arụ ọrụ dị mkpa na injin ahụ, ọ ghọkwara nkwado siri ike maka mgbanwe na mmelite nke ụlọ ọrụ ọdịnala.
Ka ọ dị ugbu a, "akụrụngwa ọhụrụ" na-eme ka mmejuputa mmemme nke ọgbọ ọhụụ nke ozi na teknụzụ nkwukọrịta dị ka ọgụgụ isi, 5G, ngọngọ, Intanet nke Ihe, igwe ojii kọmpụta, wdg, ihe ọhụrụ na ihe ịga nke ọma na-aga n'ihu na mpaghara akụ na ụba na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-adịwanye omimi, na-akwalite "" ofntanetị nke Ihe Niile "na ezigbo ọbịbịa nke oge nke ndụ ọgụgụ isi." , ụlọ ọrụ maara ihe, wdg, anọgidewo na-eme ka ọchịchọ maka ngwá ọrụ dị mma.
Kemgbe afọ 2019, ego ụlọ ọrụ na-enweta ngwa ngwa na-arịwanye elu, na ngwa nke akụrụngwa akụrụngwa na mita eji ngwaọrụ dị iche iche dị elu abawanyela. N'ụzọ doro anya, ọtụtụ ihe dị mma dị ka mmụba nke ahịa na nkwado nke atumatu mba nyere ọnọdụ dị mma maka mmepe na ịgbasawanye nke ngwa ọgụgụ isi. Na smart instrumentation, nrụgide gauges mgbe niile bụ mpaghara dị mkpa nkewa.
Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ kwenyere na na mgbanwe na-aga n'ihu nke nrụpụta ụlọ ọrụ na mgbanwe na mmepụta na mkpa ndụ, a ga-enwe ọtụtụ ndapụta ngwa ngwa nke kwesịrị ịlele obere nrụgide nke gas, uzuoku, ọkwa mmiri, wdg, na ụdị ngwa ọrụ a. maka ịtụ obere nrụgide A na-akpọ ya transmitter pressure dị iche. Dịka onye ama ama ama ama ama ama ama na-enye ọrụ na ụlọ ọrụ, Shanghai Mingkong haziri ma mepụta usoro MD-S221 nke ndị na-ebugharị nrụgide dị iche iche na nzaghachi maka mkpa ndị a dị n'elu.
Malite site na mkpa nke ahịa na ndị ahịa, usoro MD-S221 a dị iche iche nke nrụpụta nke Shanghai Mingkong nakweere ihe nrụpụta ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị ka ihe nrụgide na-achọpụta ihe, ma kwadebere ya na ikuku eletrik dị ala, nke nwere oke nkenke, Uru ndị dị ka ezigbo nkwụsi ike ogologo oge, izi ezi dị mma karịa 1% FS.
N'otu oge ahụ, MD-S221 dị iche iche na-ebunye nrụpụta nwere ike ịghọta ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nke ọkụ ọkụ ọkụ; Ntinye 4-20mA / RS485 bụ nhọrọ; o nwekwara ọrụ ndị dị ka ịgbanwee otu na ikpochapu; ma na-akwado adreesị / baud ọnụego / nyo mgbe niile / Ngosipụta ọbula ọnọdụ (RS485 ụdị); Ngwaahịa nwere mgbochi nnyonye anya imewe iji nweta nkwụsi ike na ntụkwasị obi data; o nwekwara Exia IICT4 Ga asambodo na-egosi ihe gbawara agbawa.
Ke adianade do, Mingkong si Micro esi mgbali transmitter nwere a ụlọ size nke 83.7 × 83.7mm na-mere nke ABS ihe. Ọ nwere ike nweta ike ọkọnọ voltaji nke 12 ~ 28V na-arụ ọrụ okpomọkụ nke -40 ~ 80 ℃. O nwere njirimara nke otutu ngwa. Okwesiri ka nma maka ubi nke choro nlekota ihe nlere anya di iche iche, dika sistemu ikuku, oku na anwuru oku na ikpochapu oku, nlekota ndi nlekota, ikuku nzacha ikuku, wdg.